भारतीय अभिनेत्री सेजलले किन गरिन् आत्महत्या ?::Nepal's Digital News Portal
प्रकाशित मिति : आइत, माघ १२, २०७६
मुम्बइ : भारतीय टेलिभिजन अभिनेत्री सेजल शर्माले आत्महत्या गरेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
सेजल ‘दिल तो ह्याप्पी है’ सिरियलमा सिम्मी खोस्लाको रुपमा अभिनय गर्थिन् । सेजलकी ‘कोस्टार’ अरु के वर्माले लेखेका छन्, ‘अँ यो सत्य हो, म यो समाचार सुनेर अचम्ममा परेको छु । मलाई यो कुरा पत्याउन मुस्किल भएको छ । जब कि, १० दिनअघि मैले उनलाई भेटेको थिएँ, आइतबार ह्वाट्सयापमा कुरा पनि गरेको थिएँ । जब मैले १० दिनअघि भेटेको थिएँ, उनी एकदम ठीक थिइन् ।’
वर्मा सिरियलमा सेजलका भाइ बनेर अभिनय गर्थे । वर्माका अनुसार सेजलको परिवारले शनिबार यो खबर थाहा पाएको हो । उदइपुरबाट आएकी सेजल २०१७ देखि मुम्बइमा बसेर अभिनयमा करिअर बनाउँदै थिइन् । उक्त सिरियलमा अभिनय गर्नुअघि उनी केही विज्ञापनमा देखिएकी थिइन् । सेजलले वेब सिरिज ‘अजाद परिन्दे’मा पनि काम गरेकी थिइन् ।
सेजलको आत्महत्याको कारण विस्तृतमा नखुले पनि भारतीय केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी बावुको बिमारका कारण तनावमा थिइन् । सोही कारण आत्महत्या गरेको हुनसक्ने सेजलका साथीको हवाला दिँदै भारतीय मिडियाले समाचार लेखेका छन् ।
हलिउडका चर्चित निर्देशककै छोरी ‘पोर्न स्टार’
निर्भया मुद्दाका ४ दोषीलाई फाँसी दिने निश्चित, नयाँ मृत्यु वारेन्ट जारी
अफगानिस्तानमा आत्मघाती हमला, तीन सैनिकसहित पाँचको मृत्यु
आज बुधबार: श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन, हेर्नुहोस !!
राजतन्त्र गयो, ओलीतन्त्र पनि जान्छ भन्दै डा. भट्टराईले सरकारलाई दिए यस्तो चेतावनी !!
आज मगंलबार: श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन , हेर्नुहोस !!
जुत्ता पालिस गर्ने शनि बने इन्डियन आइडलका बिजेता
शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा आगामी शुक्रबारभित्र सार्वजनिक हुने
बर्दीमा ‘टिकटक’ बनाउने सइ रानीपोखरी तानिए
चौथोपटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदै !
आज सोमबार: श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन हेर्नुहोस !!
सरकार बनेपछिकै चरम विवादमा प्रम ओली, कसले के भने ?
बाँस्कोटाबारे ओली र दाहालबीच चर्काचर्की,
विवाहको प्रलोभनमा तीन वर्षदेखि आफ्नै सहकर्मीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने डाक्टर पक्राउ
आज शुक्रबार(महाशिबरात्री): श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन हेर्नुहोस !!
आज आइतबार: श्री पशुपतिनाथ बाबाको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाईंको आजको दिन, हेर्नुहोस !!
आज सनिबार: श्री पशुपतिनाथ बाबा को दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन, हेर्नुहोस !!